Kuxoxiswana namadoda
Ihhovisi elibhekele amadoda nabantu besifazane eMzumbe ngokubambisana noMnyango wezeMpilo iTurton CHC ubambe umkhankaso wokuqwashisa ngoSugar Daddy eFountain Lake. Lomkhankaso bewubanjwe ngaphansi kwesiqubulo esithi “Phansi ngoSugar Daddy Phansi.”
UMeya kaMasipala waseMzumbe Khansela Sthembiso Gumede uxwayise abantu besilisa ukuthi bapheze ukudlala ngezingane ezincane, “Ukulala nezingane ezincane akukhombisa ukuthi uyindoda futhi kwehlisa isithunza sakho wena njengendoda.” Ube esengqungquzela amadoda ukuthi aye kohlola igazi emtholampilo, “Amadoda awayeke ukusebenzisa abantu besifazane abathandana nabo ukuzibona ukuthi sebenalo yini igciwane.” UGumede uthe amadoda alinda umuntu wesifazane athandana naye ukuthi ahlole bese ethatha leyomiphemela ukuthi kusho ukuthi naye akanalo igciwane, “Loko kusho ukuthi ukuze indoda izazi isimo sayo kumele ize ilale nomuntu wesifazane. Uma eselitholile igciwane uyothelela abanye ukuze bayomhlolela azazi naye ukuthi unalo.”
Eyala amadoda uDkt Nomsa Buso uthe amadoda awayeke ukuzibona sengathi ayahluleka ukuphatha imizi yawo uma engaphilile, “Kubalulekile ukuthi amadoda akhuphule izibalo zabantu besilisa ukuthi bayohlola igazi.”
Kulendawo abantu bebehlola igazi kanye nezifo zikashukela.